Daawo Sawirada : Mucjiso hawada ku qabsatay Shirkada Diyaaradaha Lufthansa & Shaki balaaran oo jira !! | Gaaloos.com
Home » Layaab » Daawo Sawirada : Mucjiso hawada ku qabsatay Shirkada Diyaaradaha Lufthansa & Shaki balaaran oo jira !!
Daawo Sawirada : Mucjiso hawada ku qabsatay Shirkada Diyaaradaha Lufthansa & Shaki balaaran oo jira !!
Hadal heeynta ugu badan warbaahinta dalka Jarmalka ayaa noqotay Shimbiro raxan raxan u socda oo dhaawacyo u geesatay mid ka mid ah Diyaaradaha shirkada Lufthansa oo ka soo duushay magaalada Mallorca ee dalka Spain .
Shimbirahaan ayaa qaarkood waxeey galeen ama ku dhaceen marwaxada Diyaarada qaasatan dhanka Baalasha . Arinta ugu yaabka badan ee iminka la baarayo ayaa waxeey tahay Shimbir dhaawac adag u geesatay afka hore ee Diyaarada taas oo shaki weyn ku abuurtay Hay´adaha amaanka gaar ahaan kuwa hawada dalka Jarmalka .
” Shimbirtu ma ahan Bir ama wax adag balse waxaa la yaab nagu noqotay dhawaaqa iyo sida ay u dhaawacday afka hore ee Diyaarada waxaana u maleenay Madfac ama gantaal dhulka laga soo tuuray : Sidaas waxaa yiri Richard Helmut oo Diyaaradaan Duuliye ka ahaa ”
Diyaaradii Shimbiraha dhibaateeyeen ama dhaawaceen oo u socotay magaalada Dusseldorf ee dalka Jarmalka ayaa waxaa si deg deg ah loogu soo dajiyay garoonka Diyaaradaha magaalada München ee isla gudaha dalka Germany .
Title: Daawo Sawirada : Mucjiso hawada ku qabsatay Shirkada Diyaaradaha Lufthansa & Shaki balaaran oo jira !!